Boqor Beelaha Daarood oo ka codsaday Madaxda PL in ay ciidamada isku horfadhiya Tukaraq kala qaadaan. – Puntlandtimes
Boqor Beelaha Daarood oo ka codsaday Madaxda PL in ay ciidamada isku horfadhiya Tukaraq kala qaadaan.
CARMO(P-TIMES) – Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ah boqorka Beelaha Daarood oo ka jawaabayay hadal ka soo yeeray Boqor Buurmadow oo ka soo jeeda Somaliland oo ahaa in ciidamada kusugan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool la kala qaado, ayaa sheegay in looga baahan yahay arrintaas in ay fuliyaan Madaxda dawladda Puntland.
Boqorka ayaa hadalkan ka jeediyey madasha Caleema-Saarka Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaacii Beeldaaje oo hadda ka socota magaalada Carmo ee gobalka Barri Puntland.
Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa sheegay in ay Soomaalidu aysan yeelan Karin dawlado kala qoqoban iyo dhibaatooyin dambe, balse ay doonayaan oo kaliya nabadda iyo daganaanshaha in laga shaqeeyo.
Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa yiri ”ciidamada Sool isku hor fadhiya waa in deg deg loo kala qaado Madaxwayne Muuse Biixi iyo Madaxwayne Gaas Waxaan leeyahy Madaxwayne Biixi waa cusub tahay Umada hardi ha ula imaan Madaxwayne Gaas oo wakhtigiisu gabagabo yahay waxaan leeyahay Umada haraati ha uga tagin” ayuu yiri Boqorku.
Boqorka beelaha Daarood wuxuu cadeeyey in nabaddu ay tahay waxa kaliya ee ummadda oo dhan guusha u horseedaysa, taas ay ku imaan karto wada hadal iyo in si wanaagsan looga wada hadlo wax kasta oo jira.
Madaxweynaha Puntland iy Kuxigeenkiisa ayaa kusugan madasha hadaladan laga soo jeediyey, waxaana aan la aqoon jawaabta ay bixin doonaan iyadoo aan wali la gaarin munaasabadda dhamaadkeeda, waxaana la sugayaa jawaabaha labada maamul.
Majeerteen dhaha Darood haku walaanine, maba arki kartine gormaay idi calema sarteen.